Isisombululo se-Aquaculture - iShanghai BOQU Instrument Co, Ltd.
Uhlalutyo lwamanzi luyinto eqhelekileyo kwimveliso yasemanzini. Kumaziko amaninzi emveliso, abaphathi balinganisa izinto ezahlukeneyo ezinjengobushushu bamanzi, ityuwa, ioksijini enyibilikileyo, ialkalinity, ubunzima, i-phosphorus echithakeleyo, iyonke i-ammonia nitrogen, kunye ne-nitrite. Ukwanda kwengqwalaselo kwiimeko zeenkqubo zenkcubeko luphawu lokuqonda okukhulu ngokubaluleka komgangatho wamanzi kwi-aquaculture kunye nomnqweno wokuphucula ulawulo.
Uninzi lwezibonelelo azinayo ilabhoratri esemgangathweni wamanzi okanye umntu oqeqeshwe kwindlela yohlalutyo lwamanzi ukwenza uhlalutyo. Endaweni yoko, bathenga iimitha zohlalutyo lwamanzi kunye neekiti, kwaye umntu okhethiweyo ukwenza uhlalutyo ulandela imiyalelo ebonelelwe ngeemitha kunye neekiti.
Iziphumo zohlalutyo lwamanzi aziloncedo kwaye zinokuba yingozi kwizigqibo zolawulo ngaphandle kokuba zichanekile.
Ukuxhasa ngcono i-Aquaculture, isixhobo se-BOQU sikhuphe i-online analyzer ye-multi-parameter enokuvavanya iiparameter ezili-10 ngexesha lokwenyani, umsebenzisi unokujonga idatha ukude. Ngaphezu koko, xa amanye amaxabiso esilele, iya kukwazisa ngefowuni ngexesha.
5.1. Iprojekthi yokuLima iintlanzi zangaphakathi eMalaysian
Kungenxa yeeparamitha ezili-9 kunye ne-3 pH sensors kunye ne-3 ye-oxygen sensor, ixabiso lokushisa livela kwi-sensor ye-oxygen.
I-1) I-MPG-6099 ikhethekileyo iyilelwe izinzwa ezahlukeneyo okanye izixhobo ngeRS485 Modbus RTU.
2) ine-datalogger, ikwanayo imbonakalo ye-USB yokukhuphela idatha.
3) idatha nayo inokudluliselwa yi-GSM kwiselfowuni kwaye siya kukubonelela nge-APP.
Umzekelo No Uhlalutyo kunye neSensor
MPG-6099 Isinxibelelanisi esinee-parameter kwi-Intanethi
BH-485-PH Inzwa ye-pH yedijithali ekwi-Intanethi
INJA-209FYD Inzwa yedijithali ebonakalayo yedijithali
5.2. Iprojekthi yokulima iintlanzi eNew Zealand
Le yiprojekthi yokulima iintlanzi eNew Zealand, umthengi kufuneka abeke iliso kwi-pH, i-ORP, ukuqhuba, ityuwa, i-oksijini echithakeleyo, i-ammonia (NH4). kunye nokubeka iliso ngaphandle kwamacingo kwiselfowuni.
I-DCSG-2099 Iiparamitha ezininzi zabahlalutyi bomgangatho wamanzi, sebenzisa i-chip chip enye njengeprosesa, isiboniso sischukumisa isikrini, kunye ne-RS485 Modbus, ujongano lwe-USB lwedatha yokukhuphela, umsebenzisi ufuna nje ukuthenga ikhadi leSIM ukuze athumele idatha.
Inkcazo: DCSG-2099 Isinxibelelanisi esinee-parameter kwi-Intanethi